ठूला पावर ईंटहरू र बहु ​​केबुलहरू वरिपरि लग्गिंगको दिन तपाईंको उपकरणहरू लाई टिक्ट राख्नको लागि अन्तमा हुन सक्छ। तपाईंको स्मार्टफोन वा ल्यापटप चार्ज हुनको लागि कुर्नु घण्टा, वा एक डरलाग्दो तातो चार्जर द्वारा चकित हुनु, विगतको कुरा पनि हुन सक्छ। GaN टेक्नोलोजी यहाँ छ र यसले ...
USB पावर डेलिभरी भनेको के हो?
यद्यपि कम्प्याटिबिलिटीको मुद्दा युएसबी पावर डेलिभरी विशिष्टताको परिचयको साथ विगतको कुरा हुनेछ। USB पावर डेलिभरी (वा पीडी, छोटोका लागि) एकल चार्ज मानक हो जुन यूएसबी उपकरणहरूमा सबै प्रयोग गर्न सकिन्छ। सामान्यतया, USB द्वारा चार्ज प्रत्येक उपकरणको उनीहरूको ...
ग्यालियम नाइट्राइड के हो?
गैलियम नाइट्राइड बाइनरी III / V प्रत्यक्ष ब्यान्डग्याप सेमीकन्डक्टर हो जुन उच्च तापक्रममा अपरेट गर्न सक्षम उच्च पावर ट्रान्जिस्टरहरूको लागि राम्रोसँग उपयुक्त छ। १ 1990 1990 ० को दशकदेखि, यो सामान्य रूपमा प्रकाश उत्सर्जक डायोडहरू (LED) मा प्रयोग गरिएको छ। Gallium nitride blu-r मा डिस्क पठनको लागि प्रयोग गरिएको निलो प्रकाश दिन्छ।